Arch Linux Mandidy ny mpampiasa anao rehetra ho fantatra | Avy amin'ny Linux
Na dia matetika aza aho mampiasa console, dia miaiky aho fa tsy dia mahay mitadidy baiko, amin'ny ankapobeny dia mampiasa "sheet cheat" izay nanoratako ireo didy isan-karazany izay ilaiko matetika ary indraindray tsy tadidiko. Tsy ity angamba no fomba tsara indrindra ahazoana ny baiko ilaintsika, fa io no ampiasaiko ary mety amiko izany.
Ankehitriny dia mankafy Manjaro KDE aho (Inona no distro mifototra amin'ny Linux Linux), toa nahaliana ahy ny nanao ny fanangonana ny baiko izay be mpampiasa indrindra ao amin'ny Arch Linux sy ny hafa izay tsy dia ampiasaina firy nefa manana fitaovana ilaina.
Tsara ny manamarika fa ny fomba tsara indrindra hahalala ny baiko ho an'ny Arch Linux dia ny Wiki an'ny distro mihitsy, izay misy fampahalalana tena feno sy ampy ho an'ny baiko tsirairay. Ity fanangonana ity dia tsy misy afa-tsy torolàlana fanovozan-kevitra haingana, handinihana ny baiko tsirairay (ny fampiasana azy, ny fampiasana azy, ny syntax, ankoatry ny hafa) tena mamporisika anao handeha Arch Linux Wiki.
1 Pacman sy Yaourt: ny baiko ilaina 2 ho an'ny Arch Linux
2 Didy fototra ampiasaina amin'ny Arch Linux
Pacman sy Yaourt: ny baiko ilaina 2 ho an'ny Arch Linux
Pacman y Yaourt ataovy Arch Linux ho iray amin'ireo diso tsara indrindra misy ankehitriny, amin'ny alalany no ahafahantsika mankafy fonosana sy programa an'arivony maro azo apetraka miaraka amin'ireo baiko ireo. Toy izany koa, ny fitaovana roa dia miasa amin'ny fomba itovizany tokoa ka ny fianarana ny fampiasana azy dia tena tsotra.
Pacman no mpitantana fonosam-bidy Arch Linux, mandritra izany Yaourt dia fonosana iray ahafahantsika miditra amin'ny trano fivarotan'ny vondrom-piarahamonina AUR, izay ahafahantsika mahazo iray amin'ireo katalaogin'entana nangonina lehibe indrindra misy ankehitriny.
Ny baiko Pacman sy Yaourt fototra izay tsy maintsy fantatsika dia ireto manaraka ireto, hanangona azy io amin'ny zavatra ataon'izy ireo izahay, afaka mahita ny fitovizan'ny baiko ianao, amin'ny fomba mitovy amin'izany, manasongadina fa pacman dia novonoina tamin'ny sudo ary raha tsy izany dia tsy ilaina izany.
sudo pacman -Syu // Rafitra fanavaozana yaourt -Syu // Rafitra fanavaozana yaourt -Syua // Rafitra fanavaozana ankoatra ny fonosana AUR sudo pacman -Sy // Ampifanaraho amin'ny fonosana yaourt -Sy // Ampifanaraho ny fonosana avy amin'ny angona sudo pacman -Syy // Force fampandrindrana ireo fonosana avy amin'ny tahiry yaourt -Syy // Ampirisiho ny fampifanarahana ireo fonosana avy amin'ny tahiry sudo pacman -Ss fonosana // Mamela anao hitady fonosana ao amin'ny repository yaourt -Ss fonosana // Mamela fonosana ao amin'ny toeram-pivarotana sudo pacman -Eny fonosana // Mahazoa fampahalalana avy amin'ny fonosana iray izay ao amin'ny repositories yaourt -Yes fonosana // Mahazoa fampahalalana avy amin'ny fonosana iray izay ao amin'ny repositories sudo pacman -Qi fonosana // Asehoy ny mombamomba ny fonosana napetraka yaourt -Qi fonosana // Asehoy ny mombamomba ny fonosana napetraka sudo pacman -S fonosana // Mametraka ary / na manavao fonosana yaourt -S fonosana // Mametraka ary / na manavao fonosana sudo pacman -R fonosana // Esory fonosana yaourt -R fonosana // Esory fonosana sudo pacman -U / lalana / mankany / ilay / fonosana // Mametraha fonosana eo an-toerana yaourt -U / lalana / mankany / ilay / fonosana // Mametraka fonosana eo an-toerana sudo pacman -Scc // Hamafana ny cache fonosana yaourt -Scc // Hamafana ny cache cache sudo pacman -Rc fonosana // Esory fonosana iray sy ny fiankinan-doha aminy -t fonosana // Esory fonosana iray sy ireo miankina aminy sudo pacman -Rnsc fonosana // Esory fonosana iray, ny fiankinan-doha ary ny toerana misy anao yaourt -Rnsc fonosana // Esory fonosana, ny fiankinan-doha ary ny toerana misy azy sudo pacman -Qdt // Asehoy fonosana kamboty yourt -Qdt // Asehoy fonosana kamboty
Didy fototra ampiasaina amin'ny Arch Linux
Efa taloha dia navoaka teto Avy amin'ny Linux sary iray ahafahanay manamboatra goba, ahafahantsika manana ny baiko Arch Linux eo an-tànany, ity sary ity dia mandrakotra ny ambin'ireo didy izay tianay hizara aminao.
Azonao atao ny manampy ireo baiko ireo miaraka amin'ny torolàlana izay natao taloha, miaraka amin'ny Didy mihoatra ny 400 ho an'ny GNU / Linux izay tokony ho fantatrao 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mandidy ny Arch Linux izay tokony ho fantatry ny mpampiasa anao rehetra
Tena tsara. Izy io dia miasa ho ahy marina ho an'ny Arch izay ananako ao amin'ny netbook-ko ary ny partition azoko miaraka amin'i Parabola GNU / Linux-libre amin'ny PC-biriko.
Ny fampahalalana rehetra dia ao amin'ny wikipedia archlinux. : /
Mitanisa am-bava izay nosoratako tao amin'ny lahatsoratra aho:
«Tsara homarihina fa ny fomba tsara indrindra hahalalana ny baiko ho an'ny Arch Linux dia ny distro Wiki mihitsy, izay misy fampahalalana tena feno sy ampy ho an'ny baiko tsirairay. Ity fanangonana ity dia tsy inona fa ny torolàlana amin'ny fanovozan-kevitra haingana, handinihana ny baiko tsirairay (ny fampiasana azy, ny fampiasana azy, ny sintona, ankoatry ny hafa) tena mamporisika anao izahay handeha amin'ny Arch Linux Wiki. »
Na izany na tsy izany dia tokony hanao lahatsoratra misimisy momba ny ArchUsers ry zareo.
Bebe kokoa amin'ny ahy rehefa avy very fanazaran-tena: /
ao amin'ny fantsona youtube misy ahy dia misy horonan-tsary marobe ary ao amin'ny bilaogiko koa https://archlinuxlatinoamerica.wordpress.com 😉
Hadinonao ilay tsara indrindra havaozina:
Tsaroantsika mora kokoa ny Suya amin'ny teny espaniola noho ny Syua ary tsy miova ny filaharan'ireo masontsivana, amin'ity tranga ity
Mikasika ny noconfirm, ho an'izay havaozina avy amin'ny AUR dia horonan-taratasy ny fanamafisana izay angatahiny, indrindra raha probon ianao, ary noho izany dia mamonjy azy ireo ianao.
Lagarto, manana Internet miadana be ao amin'ny Arch aho mandritra ny volana maro fa amin'ny tranga Mageia dia mandeha tsara izy io, tsy niditra anaty vala aho ary nanararaotra ny fananako tetezana tiako hojerena hoe ahoana no ahafahako manamboatra azy io.
Nisy zavatra toy izany nitranga taminao?
Miala tsiny raha mandika lalàna ity.
apetraho amin'ny kalitao avo lenta ny sary goba
Salama, azafady ny tsy fahalalako lalina, fa manana fanontaniana lehibe aho: 3 andro no nampiasako Arch, manana boot roa miaraka amin'ny rafitra miasa hafa aho. Tiako ny distro, saingy manana olana aho: tsy afaka mametraka anao aho (voalohany efa napetraka ny base-devel), novaiko ny pacman.conf tamin'ny fampiasana nano ary nasiako ny repo
SigLevel = Sanatria
Saingy azoko ny lesoka: error: tsy nahazo ilay rakitra "archlinuxfr.db" avy amin'ny repo.archlinux.fr: miadana loatra ny fiasa. Latsaky ny 1 bytes / sec no namindra ny 10 segondra farany
hadisoana: tsy nahomby tamin'ny fanavaozana ny archlinuxfr (hadisoana ny famakiam-boky)
Notsapaina tamin'ny fandaozana ny SigLevel = Safidy azo itokisana, ho fitsapana fotsiny. Ny hafainganam-pandeha amin'ny Internet dia ampy, ny repo hafa dia tsy manome ahy olana, afaka mizaha na misintona amin'ny hafainganana nataoko aho.
Ny fanontaniako dia hoe raha mbola misy ve ity repo ity na raha tokony esoriko mivantana avy any AUR ianao ary hamory azy.
Miarahaba ary miala tsiny raha tena adala ny fanontaniana, fa averiko ihany fa 3 andro vao niaraka tamin'i Arch aho.
Aorian'ny fampidirana ny tahiry sy ny fitehirizana dia apetraho ny yaourt:
Valiny tamin'i Steve
Miarahaba anao, tiako ny fanampianao amin'ny fanontaniana iray, ao amin'ny Arch, na ny zanakao Antergos izay ampiasaiko, ilaina ve sa azo atao ny manavao ireo mpamily manana ny carte de vidéo satria atao amin'ny distos toa an'i Ubuntu? Raha azo atao, azonao omena ahy ve ny tanako hanazava ny fomba hanaovana azy?